Alahady 08 Desambra 2019 - FJKM Amparibe Famonjena
« Mba ho tahaka ny zava-maniry maroroka ny zanakai-lahy, Ary ho tahaka ny vato fehizoro voasoratra tsara toy ny fomban'ny lapan'andriana ny zanakai-vavy. » (Salamo 144:12)
Alahady 8 Desambra 2019. Alahady hitondrana ambavaka ny sampana sekoly alahady. Alahady faharoa manaraka ny advento. Herinandrombokatry ny sampana sekoly Alahady ary mankalaza ny ivon’izany izy ireo. Natokany hizarana Loka ho an’ireo mpianatra moa ity andro androany ity. Atoa REMARA Donatello, mpitandrina ao amin’ny Fjkm Ankazotsara, SP 35.
Nitarika ny fotoana anio ny filoha Atoa Razafindrasata Abel ary nanao ny vavaka sy ny vakiteny dia ireo ankizy mpianatra ao amin’ny sekoly alahady. Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no nitondrana ny fotoana.
Ny Salamo 113 : 1-9 no novakiana nentina niderana an’Andriamanitra. Noventesina ny hira faha 200 taona sekoly Fjkm. Natao ny vavaka fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra.
FOTOANA HO AN'NY ANKIZY
Zoky Dina Rabearinoro no nitondra ny fotoana ho an’ ny ankizy, birao sekoly alahady. Vavaka no nanombohany ny fotoana. Taorian’izay dia niara namaky ny Salamo 119 : 66. « Ampianaro fahafantarana tsara sy fahalalana aho. Fa matoky ny didinao aho. »
Nisy ankizy vitsivitsy nanao tantara antsehatra. Tantara milaza ny nitondran’ireo misionera ny baiboly no nataon’izy ireo.
Nitsangana ny fianakaviamben’ny sekoly alahady niara namaky ilay teny taorian’izay.
FIOMANANA AMIN'NY SORATRA MASINA
Natao ny Ffpm 786 :1, 4 mialoha vavaka sy ny vakiteny. Ireo mpianatra sekoly alahady no nanatanteraka ny vakiteny. Ny perikopa anio dia nalaina tao amin’ny Joba 36 :5-15, Lioka 11 :27-28, 2 Tesaloniana 3 :6-16.
Noventesina ny hira Ffpm 212 :1 mialoha ny hafatra
REMARA Donatello, mpitandrina no nitondra ny Hafatra. Ny teny tondrozotra sekoly alahady no hafatra nentina izay nalaina tao amin’ny Salamo 144 :12 « mba ho tahaka ny zavamaniry maroroho ny zanakay lahy ary ho tahaka ny vao fehizoro voasoratra tsara toy ny fomban’ny lapan’andriana ny zanakay vavy ».
Mizara dimy ny bokin’ ny Salamo. Ity andininy ity dia anatin’ilay fizarana fahadimy farany. Ny bokin’ny Salamo dia fanangonana avy amin’ny fanangonana. Tao amin’ny andron’Ezra sy Nehemia no hanaovana izany. Ity Salamo farany ity dia antsaina hoe « Davidika », salamo fiderana nataon’i Davida noho ny fanambinan’Andriamanitra azy. Ny fangatahana nataony teto dia ny mba hitahian’andriamanitra ny taranany ihany koa. Tanjon’i Davida dia ny mba ho sambatra sy ho tsara ny zanany lahy sy vavy.
Tanjona’Andriamanitra dia ny hananantsika fiadanana. Isika nefa dia mbola miaina ny lohahvetra Fjkm « Iaino ny fiadanan’ny Tompo ». Mifandray tsara hoy ny mpitandrina nitondra ny Hafatra ny teny faneva sy ny lohahevitra amin’ity volana ity.
Isika koa dia toy izany amin’ny fiainantsika. Samy maniry ny ahasambatra sy ahatsara ny zanantsika. Nefa moa ve isika mijanona maniry fotsiny ihany sa misy asa ataontsika ahatanteraka izany?
Mila fandraisana andraikitra izany mba ahatanteraka azy ary misy anjara tandrify tokony ho ataon’ny ray amandreny mitaiza, nefa koa misy ataon’ny zanaka izay taizana.
Inona ary no andraikitry ny ray amandreny, ny Fiangonana manoloana izany ?
Raha jerena ny teny voalaza ao amin’ity bokin’ny Salamo ity, ny zavamaniry maroroka dia tiana hilazana fa ny faniriana dia ny mba hitombo saina, fanahy, vatana, mitombo fitia eo imason’Andriamanitra ny zanaka.Tamin’ny nanolotra ireo zaza ho amin’ny sakramentan’ny batisa ny ray amandreny dia nilaza hoe « vonona hivavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka, ary hanao izay hahatonga azy ho mpianatra sekoly alahady, … ».Ireo izany dia tena adidin’ny ray amandreny eo anivon’ny zanany mba ho tontosa ireo fikasana tsara aminy ireo.
Amin’ny fomba fitaizana eo anivon’ny fiaraha-monina moa dia ambara fa ny zaza kapohindava tonga mpamalivaly, ny zaza bedesindava lasa tsy mahatoky tena. Tokony ho zarina amin’ny lalana tokony alehany ny zaza. Andriamanitra aza tsy namingavinga antsika zanany raha nanota isika fa maika aza notiaviny ka nanirahiny ny zanany mba hitondra ny helontsika.
Isika ray amandreny rehefa mandray andraikitra dia lasa andry hiankinan’ny hafa. Mila lazaina ny zaza ny lafiny tsara sy ratsy amin’ny rehetra ataony sy ny ho aviny.
Inona kosa ary ny andraikitry ny zanaka manoloana ny ray amandreny ?
Ny zanaka dia tokony hanaja ray amandreniny. Ny zanaka dia mila mianatra amin‘Andriamanitra izay fomba tokony ataony hanajany ny ray amandreniny.
Ny zanaka koa dia tokony ahay fa tokony ahafantatra fa mila mikely aina sy misasatra fa mahita tombontsoa. Namafisin’ny mpitandrina izany ao amin’ny 2 Tesaloniana 3 : 8 « ary tsy nihinanan foana izay hanin’ny olona, fa niasa andro aman’alina tamin’ny fikelezan’aina sy ny fisasarana … ».
Raha mahafinaritra ny ataon’ny ray amandreny dia mila alain’ny zanaka tahaka.
Misy koa nefa ny namandratsy izay mitarika amin’ny ratsy. Misy karazana maro ireo namana.
Misy ny Namana parasy : Mitsetsitra izay tsara any aminao fotsiny izy ary rehefa tsy misy izany dia hialany hianao
Misy ny namana jorery : Mitabataba foana no ataony na inona na inona zavatra mitranga ary dia entin mitabataba miaraka aminy eny hianao
Misy ny namana menarana : izay mpamitaka sy tena mitarika amin’ny ratsy
Misy ny namana vorondolo : Mitarika foana handeha hivoaka amin’ny alina, hany ka lasa tia rendrarendra.
Mampianatra mihitsy nefa ny Tompo fa ireo dia tsy tokony ho raisina fahavalo fa hivavahana mandrakariva.
Misy koa nefa ny hakamoana. Araka ny efa voalaza etsy ambony dia mila zarina amin’ny fandraisana andraikitra ny zanaka.
Raha te ho sambatra dia mila mihaino ny tenin’Andrimanitra, na ny zanaka izany na ny ray amandreny. Eo amin’ny filazantsara araka ny Lioka 11 : 27-28 dia manambara fa raha nisy vehivavy nilaza tamin’ny Tompo hoe sambatra ny kibo izay nitondra Azy dia namaly ny Tompo ka nanao hoe : « Eny tokoa, nefa sambatra aza ny mihaino ny tenin’Andriamanitra ka mitandrina azy ».
Ny Sekoly alahady izany dia nahatonga anao ho sambatra satria dia ny tenin’Andriamanitra mihitsy no hianaranao ao.
Namarana ny hafatra ny mpitandrina nilaza fa na inona fahaizana mety hanananao, rehefa tsy misy tenin’Andriamanitra no manaraka azy dia ho very foana izy. Tsy ampy ny fananana taratasy fotsiny fa mila asa mihitsy.
Nanao ny vavaka fifonana sy fanolorantena ny mpitarika rehefa nahare izany hafatra izany ary nanonona ny fanekem-pinoana laharana faharoa ny rehetra taorian’izany vavaka izany.
Nanatanteraka ny tatitry ny sampana ny mpitantsoratra Rabenasolo Landy. Sekoly alahady misitraka ny fiadanan’ny Tompo. Anisan’ny voalazany ary ireto asa notanterahiny ireto : 25/12/18 : fety krismasy, 31/12/18 : famaranana 155e ary nanolorana video projecteur d’écran, 27/01/19 : fanadinana andrana, 03/92/19 : fifidianana birao vaovao, 21/07 : fanadinana, 18/10/19 : fanokanana taompianarana, 14/09/19 : fandraisana anjara tamin’ny asa fanavaozana ny sekoly fjkm ambohidratrimo.
Nanao ny anjara hirany ny mpikambana ka niara-niredona izany ny mpianatra sekoly alahady rehetra, miaraka amin’ireo mpampianatra. Ny hira nataony dia ny hira « antoky ny famonjena ».
Nisy hafatra avy amin’ny ray aman-dreny Atoa René Ratovelomanana, mpampiantra sy mpitarika ny sampana sekoly alahady fahiny. Nisaotra ireo tompon’andraikitra izy ary nankahery ireo mpikambana rehetra mba hazoto hatrany amin’ny tohin’ny asa sahanin’izy ireo.
Novakian’ny filohan’ny sampana izay nitarika ny fotoana ny hafatra avy amin’ny sekoky alahady foibe. Niompana indrindra amin’ny fisian’ny Samm (sekoly alahady manomana mpampjanatra)
Mamy Razafimaharo no namaky ny raharahampiangonana. Anisan’ny voalazany tamin’izany ireto manaraka ireto :
Ny Librairie Antso dia lasa afaka manao livraison à domicile ireo entana izay vidina ao amin’ny miaraka amin’ny sarany 2000Ar.
Manomboka anio ny fianarana katekomena ka nanentana ny mpitandrina avy eo ho an’ireo izay vonona hiroso amin’izany.
Nisy ny fanoloranjaza mialoha ny rakitra sy ny fanomezana.
Novakiana ireo voady sy raki-pisaorana ka Atoa Razafindrabe John Bam no nanatanteraka izany. Ireo hira nangatahan’ireo mpanao raki-pisaorana ny Ffpm 295 :1, ff14 :3, ff7 :1.
Fanolorana rakitra ffpm 71 :3
Teo amin’ny asa vavolombelona no natao ny fizarana loka ho an’ireo sekoly Alahady. Nahazo avokoa ireo mpianatra sekoly alahady teo aloha sy ireo mpianatra vaovao vao niditra.
Nataon’ny mpitandrina ny vavaka fangatahana. Ary rehefa izany dia natao ny Ffpm 81 : 1. Novakiana ny tondrozotra ary nomena ny tsodrano.
Natao ny Ffpm 81 :4 namaranana ny fotoana.
Harentsoa Rova no teo amin’ny fanamafisam-peo, Rajaofetra Arielle no teo amin’ny fàfana elektronika ary Irimanana Eninkaja no nitendry ny orga.
Naka ny sary : Ranaivoson Joël Nandray an-tsoratra : Robel Hanitra